Wasaaradda arrimaha gudaha oo magacowday Guddiga farsamada dhismaha Galmudug -News and information about Somalia
Home Warkii Wasaaradda arrimaha gudaha oo magacowday Guddiga farsamada dhismaha Galmudug
Wasaaradda arrimaha gudaha oo magacowday Guddiga farsamada dhismaha Galmudug
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u- heshiisiinta XF Soomaaliya ayaa magacowday Guddiga Farsamada Maamul Dhisidda Dowlad Gobaleedka Galmudug, kaas oo maalmihii la soo dhaafay la hadal haayey in la Magacaabayo.
Guddigaan ay Magacaawday Wasaarada Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa ay ka koobanyihiin 13 Xubnood.
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in Guddiga ay iska dhex dooran doonaan Guddoomiye, ku xigeenka iyo xubnaha kale ee la shaqeynaya.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradad Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ahna kusimaha Wasiirka Isaaq Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in guddigaan la Magacaabey laga sugayo Go’aanadii kasoo baxay shirkii dib u heshiisiinta Galmudug.
Previous articleMaxaa ka soo baxay kulankii Farmaajo iyo xubnaha beesha Habargedir ee ku jira DFS
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo maanta furaya Kalfadhiga 6aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka XFS oo wajahaya mowjado baaritaano ah [Kiiska...